Munamato kuSan Roque.? Iye mutsvene wenguva dzedenda.
Munamato kuSan Roque Icho chombo chine simba kune vese avo vanoda kupindira kwamwari mumamwe mamiriro ezvinhu anogona kusimuka muhupenyu, kungave zvakananga kana zvisina kunanga.
Simba racho yeminamato hazvienzanisike, naivo tinogona kuwana kukunda uko zvimwe zvaisazokwanisika kukunda.
Chinhu choga chinodiwa kuti munamato ushande ndechekuzviita nekutenda, hatigone kungozvikumbira, asi zviite nekutenda kubva pamoyo, nemoyo yakatendeka uye neshuwa kuti mhinduro yatakumbira zvakawanda zvakadaro ichapihwa.
San Roque semuchengeti akatendeka wevanhu vanoshaya anogona kunzwisisa kutambudzika kwedu kana akatambura nechirwere chero chipi.
Ngatishandisei chishandiso ichi uye tinamate kuti izvo zvishamiso zvatinoda zvakanyanya zvakapihwa kwatiri munguva yakafanira yaMwari Baba Musiki.
1 Munamato kuSan Roque Ndiani San Roque?
1.1 Namata kuna San Roque patron yemhuka (yakarasika)
1.2 San Roque munamato wembwa dzinorwara
3 Musande uyu ane simba here?
Munamato kuSan Roque Ndiani San Roque?
Nyaya yacho inotaura kuti aive mwanakomana wegavhuna weMontepelfer uye akazvarwa muna 1378. Hupenyu hwake hwaive hwakajeka uye paakanga aine makore makumi maviri, vabereki vake vakafa.
Kuve nherera mudiki, Roque aive akazvipira kutarisira varwere veimwe yehuswa hwakanyanya hwaakatambura panguva iyoyo.
Iyo nyaya inoreva chokwadi kuti, apo aive achitarisira varwere ava, pakanga paine vazhinji vakagamuchira kuporeswa kwakazara uye nechishamiso apo San Roque yakamuita muchinjikwa pahuma yake.
Izvi hazvishamise sezvo mune zvitsvene magwaro tinoona kuti kuporesa kunogona kuperekedzwa kunyangwe nemumvuri, sezvakaitika kune muapostora Peter.
Naizvozvo, chokwadi chekuti munhu anogona kusimbisa kuporesa nechiratidzo chimwe chete chemuchinjiro chiito chatinogona kutenda sechishamiso chinouya zvakananga kubva kuna Mwari.
Zuva rake rinopembererwa chero Nyamavhuvhu 16.
Namata kuna San Roque patron yemhuka (yakarasika)
Ngoni Dzakanaka Roque,
akanaka, anetsitsi uye anoshamisa musande,
kuti wakazvipa muviri nemweya kuna Baba vedu Mwari
uye waida mhuka nemoyo wako
Naizvozvo uri chimiro chake chinokudzwa.
usavasiye vasina rubatsiro pavanenge vachida
usavarege vanzwe vasina rubatsiro kana vakatarisana nenhamo
uye uvape zvese zvavanoda kuti zvakanaka zvavo vararame.
Namata kuna She kuti vakunzwire tsitsi uye nekuropafadza Franchesca
uye mumuchengete hupenyu hwake hwese pasi pekudzivirirwa nekuchengetwa.
Iye ndeimwe nhengo yemhuri,
Shamwari yangu shamwari uye shamwari.
ndiye anondipa rudo rwake asina mhosva,
Akatendeka uye anondinyaradza uye anoita kuti mazuva angu afare
uye zvinondipa zvakawandisa kupfuura izvo zvavanogamuchira.
Mutsvene Roque, anodiwa, muranda anokudzwa waIshe,
kuti iwe wakabetserwa nechishamiso nehukutu
apo varume vakakusiya nekuda kwehurwere hwako,
Iye akatendeka kukuunzira zuva nezuva
uye nerudo nyara maronda ako kuti uregerere kurwadziwa kwako,
saka iwe uri mudziviriri wemhuka,
Nhasi ndauya kwauri ndizere nekuvimba
uye uchiziva kuti wakanaka uye une moyo munyoro
Ini ndinokuisa kune wangu pet Franchesca.
Chishamiso San Roque, mudziviriri wemhuka dzose,
Nhasi ndauya kwauri kuzondibatsira mukutambudzika kwangu,
shandisa simba rako rekureverera pamberi paMwari
Kuti ndiwane ngoni dzake
Zvandinokumbira nemoyo wangu wepwere yangu:
Chengetedzai iye kuti agare achifara,
tarisa mudiwa wangu Franchesca
kuti akashaya chikafu, hapana mubhedha, hapana kambani, hapana mitambo,
umuchengete kubva pane zvese zvakaipa, kubva kune zvese zvinokuvadza uye yakaipa mamiriro;
Usambofa wakasuruvara kana kunzwa uchisiiwa
usambove uchishayikwa murudo, hanya uye ushamwari
zvekuti haambonzwa kutya, kutya, kana kusurukirwa.
gara uchiitirwa rudo neruremekedzo
kurarama uzere nemufaro uye hutano
uye uve nehupenyu hurefu uye hunofadza.
Ini ndinobvunza iwe, iwe wakaropafadzwa Saint Roque kune hutano hwako,
kure nezvirwere zveFranchesca,
kubva kuDenga kunotumira kurapwa.
nekuvimba kukuru uye nekutenda, ndinoisiya mumaoko ako,
muite kuti aporezve simba rake uye simba
kuti arege kutambudzika,
usamurega achitambura kana kurwadziwa.
Inoshungurudza matambudziko ako, inoporesa maronda ako kana chirwere.
Ndinoonga rubatsiro rwako munguva dzino dzakaoma,
Ndinoziva kuti hauzoregi kuchengetedza uye kutarisira Franchesca
uye kuti unotora zvandinokumbira kuna She,
ndiani akasika zvisikwa zvipenyu zvese zvinozadza nyika
Nerudo nemutsa, anochengeta uye nekutarisira zvisikwa zvake zvese.
Ndiye mutungamiriri wezvirwere zvinotambudzwa nemombe, imbwa, vanhu vakaremara, denda uye humwe hurema maererano nehutano hwevanhu nemhuka.
Chechi yeKaturike yakarongedza munamato kana semuenzaniso wemunamato unoshanda mune idzi zviitiko uko mhuka dziri kutambudzika uye inoda chishamiso chekuporesa.
Kuita munamato uyu hazvifanirwe kugadzirira zvakatipoteredza, kunyangwe iwe uchigona kupenyesa mamwe makenduru kana kugadzira atari yakakosha yemutsvene uyu.
Unogona kunyengetera wega kana semhuri, izvo zvinodikanwa uye zvinofanirwa kuchengetwa nguva dzese kutenda.
San Roque munamato wembwa dzinorwara
Mutsvene, mutsvene, uyo akabatsira varwere vazhinji, Saint Roque, avo, nekuda kwetsitsi dzaMwari, vakaita zvishamiso, mavakatenda musimba rako rekuporesa ...
Ini ndinokumbira iwe, nekuzvininipisa kwechokwadi, ndibatsire ini kuti imbwa yangu uye shamwari yakatendeka, ______, iponeswe kubva kuchirwere, icho chaita kuti iye ashaiswe simba zvakanyanya, agadzire, akwidziridze uye anonzwisisa musande ...
San Roque, kuti iwe waida imbwa zvakanyanya, zvekuti imbwa yangu inoporesa uye inomhanya zvakare seyakafara sepakutanga.
Imbwa zvakare chisikwa chaMwari uye zvakare tinofanirwa kutariswa uye kutarisirwa.
Panguva iyo chipfuyo chedu chiri kuenda munguva yakaoma yehutano tinogona kusimudzira munamato kuna San Roque kuti atarisire mhuka uye nekumupa chishamiso chekuporesa.
Tinogona zvakare kubvunza kune idzo mhuka dziri kurwara mumigwagwa kuitira kuti uyu munyasha ane chishamiso uye nechishamiso avape hutano uye nehanya zvavanoda.
Nguva yakanakisa yekunamata iri mu inzwa kuda kuzviita.
Izwi raMwari rinotaura kwatiri nezvemunamato uye rinotiudza kuti, pese pataida rubatsiro, Baba vekudenga vanogara vachida kuteerera minyengetero yedu.
Ipapo tinogona kunzwisisa kuti hapana chakarongeka hurongwa kunyange vamwe vachirayiridza kuita kudaro. mangwanani uye nekuungana kwemhuriChokwadi ndechekuti zvinogona kuitwa chero nguva uye munzvimbo chero ipi zvayo.
Ehe, nekuti paakanga achiri mupenyu iyewo akatambura nedenda rakafanana nerevaya vaairiritira uye munguva pfupi yakatevera akaporeswa uye akaramba achitarisira varwere vakawanda muzvipatara zvakasiyana.
Kubva ipapo kusvika nanhasi anotenda musimba rake rekuita zvishamiso kubatsira vakaderera.
Namata munamato kuna San Roque patron yemhuka dzakarasika uye dzinorwara nekutenda kukuru.
Namata futi uyu munamato wakasimba
Wemasimba kwazvo munamato kuna Mutumwa Michael Mutumwa mukuru
Namata kuna San Alejo wezuva rega rega